ဧရာမ ရနေံစိမျးတငျ သင်ျဘော ၁၁ ၇ စီး တရုတျပွညျသို့ ဦးတညျခုတျမောငျး - Logistics Guide
ရနေံစညျ ၂ သနျး တငျပို့နိုငျသညျ့ အလှနျကွီးမားသော ရနေံစိမျးသယျယူပို့ဆောငျရေးရယောဉျ
(VLCC- very large crude carrier) စီးရေ ၁၁၇ စီးသညျ မလေအလယျမှ သွဂုတျလလယျအတှငျး တရုတျနိုငျငံရှိ ဆိပျကမျးမြားသို့ ဦးတညျခုတျမောငျးလကျြ ရှိသညျဟု Bloomberg သတငျးတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ရနေံတငျပို့မှုတှငျ ၀ ယျလိုအားပွနျရှိလာခဲ့ပွီး တရုတျနိုငျငံသညျ နှဈအနညျးငယျအတှငျး စြေးအသကျသာဆုံးရနေံစိမျးကို အခှငျ့ကောငျးယူနပွေီး ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးရနေံတငျသှငျးမှုကို ဆောငျရှကျလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။
အဆိုပါ ဧရာမ ရနေံစိမျးတငျ သင်ျဘောကွီးမြားဖွငျ သယျဆောငျသညျ့ ရနေံစိမျးမြားသညျ လာမညျ့ သုံးလအတှကျ တရုတျပွညျသို့ ရနေံစိမျး စုစုပေါငျး အနညျးဆုံးစညျပေါငျးသနျး ၂၃၀ ရောကျရှိမညျ ဖွဈသညျဟု တှကျခကျြခနျ့မှနျးထားသညျ။
သင်ျဘောမြားပျေါ တငျဆောငျလာသညျ့ ရနေံစိမျးမြားသညျ ယခုထကျ ဈေးသကျသာသော ဧပွီလတှငျ ဝယျယူခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ တရုတျနိုငျငံမှ ရနေံသနျ့စငျစကျရုံ လုပျငနျးမြားသညျ ပွီးခဲ့သညျ ဧပွီလကတညျးက ရနေံဈေး ထိုးကနြစေဉျ ရနေံစိမျး အမွောကျအမွား ဝယျယူခဲ့ကွသညျ။
တရုတျနိုငျငံ၏ရနေံစိမျး တငျသှငျးမှုသညျ ဧပွီလတှငျ ၉ . ၈၄ သနျး bpd ( တဈရကျအတှကျ စညျစုစုပေါငျး)အထိ မွငျ့တကျခဲ့ပွီ ပွညျတှငျးမှာ လောငျစာဆီလိုအပျမှု ပွနျလညျမွငျ့တကျလာခွငျးနှငျ့ဒသေဆိုငျရာရနေံသနျ့စငျစကျရုံမြားသညျ ရနေံစိမျးသနျ့စငျခကျြလုပျမှုကို တိုးမွငျ့လာခဲ့သညျ။
ဧရာမ ရေနံစိမ်းတင် သင်္ဘော ၁၁ ၇ စီး တရုတ်ပြည်သို့ ဦးတည်ခုတ်မောင်း
ရေနံစည် ၂ သန်း တင်ပို့နိုင်သည့် အလွန်ကြီးမားသော ရေနံစိမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရေယာဉ်
(VLCC- very large crude carrier) စီးရေ ၁၁၇ စီးသည် မေလအလယ်မှ သြဂုတ်လလယ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်းများသို့ ဦးတည်ခုတ်မောင်းလျက် ရှိသည်ဟု Bloomberg သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေနံတင်ပို့မှုတွင် ၀ ယ်လိုအားပြန်ရှိလာခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဈေးအသက်သာဆုံးရေနံစိမ်းကို အခွင့်ကောင်းယူနေပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေနံတင်သွင်းမှုကို ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဧရာမ ရေနံစိမ်းတင် သင်္ဘောကြီးများဖြင် သယ်ဆောင်သည့် ရေနံစိမ်းများသည် လာမည့် သုံးလအတွက် တရုတ်ပြည်သို့ ရေနံစိမ်း စုစုပေါင်း အနည်းဆုံးစည်ပေါင်းသန်း ၂၃၀ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်ဟု တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားသည်။
သင်္ဘောများပေါ် တင်ဆောင်လာသည့် ရေနံစိမ်းများသည် ယခုထက် ဈေးသက်သာသော ဧပြီလတွင် ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ရေနံသန့်စင်စက်ရုံ လုပ်ငန်းများသည် ပြီးခဲ့သည် ဧပြီလကတည်းက ရေနံဈေး ထိုးကျနေစဉ် ရေနံစိမ်း အမြောက်အမြား ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ရေနံစိမ်း တင်သွင်းမှုသည် ဧပြီလတွင် ၉ . ၈၄ သန်း bpd ( တစ်ရက်အတွက် စည်စုစုပေါင်း)အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီ ပြည်တွင်းမှာ လောင်စာဆီလိုအပ်မှု ပြန်လည်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ဒေသဆိုင်ရာရေနံသန့်စင်စက်ရုံများသည် ရေနံစိမ်းသန့်စင်ချက်လုပ်မှုကို တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။